Qisaska Naftood hurayaasha (Masuul iyo laga masuulba) Qaybtii 3-aad. | ogaden24
Qisaska Naftood hurayaasha (Masuul iyo laga masuulba) Qaybtii 3-aad.
Jan 15, 2017 - Aragtiyood
Goortii ay hal saac oo fiidnimo tahay ayuu Cabdiraxmaan u yeedhay Maxamed Sh cali oo uuna qudhiisu aqoon hore u lahayn laakiin madashu kulmisay, si ixtiraam ku dheehan-yahay ayuu Dhagawayne ugu yidhi: Adeer iyo N/hure waardiga qabo, waana 30 daqiiqo kadibna waa lagu baddali, sidaas iyo fulin wanaagsan intuu yidhi ayuu Dhagawayne sii dhaqaaqay.
Maxamed Sh Cali waxaa haysta dhawr cilladood:
Tan hore, waa ciidanka oo uu dhawaan kusoo biiray sidaa awgeed weli si fiican uma laylyamin;
Tan labaadina waa nidaamka X/dhexe uyaalla oo uuna habayaraatee wax aqoon ah u lahayn iyo tan saddexaad oo ah inuu horay usoo noqday guddoomiye jaaliyadeed isuna arko inuu yahay masuul jabhadeed oo aan mudnayn in Waardi ama gaadh loo diro.
Dhawrkaas arrimood oo isbiirsaday waxay Maxamed Sh Cali laabtiisa ku tuureen dareen!. sida uu isagu goor dambe nooga sheekeeyay wuxuu Maxamed iswaydiiyey su’aalo ay kamid yihiin: miyaadan nin masuula ahayn sidee wiilkan yari waardiga kuugu diri? tolow ma tidhaahdaa war digtoonow? Amar-diido masamaysaa mise waaba 30 daqiiqo’e intaad biyo iska cantuugsanaato ayaad berri wiilkan yar la xisaabtantaa? bi’iwaaye nin-wayna waa tahay, fudayd-na laga fiicane berri u dhigo arrinta, eeggana Waardiga iska qabo, gurrac-kasta hakugu ahaatee waaba 30 daqiiqo’e ayuu go’aankii kusoo ururiyey.
Maxamed wuu qaatay amarkii wuxuuna fuulay waardigii. Dhagawayne ma-oga waxa ka guuxaya laabta Maxamed sh cali.
Markii ay 30-kii daqiiqo u dhammaadeen welina aad ula yaaban yahay sida ay ku dhacday inuu Waardi qabto ayaa waxaa u yimid guddoomiyihii X/dhexe (N/hure Kayd) oo sinta ku wata qori AK47 ah, salaan kadib Kayd wuxuu yidhi: Maxamed waardigii wuu kuu dhammaadaye orod difaacaagii ku laabo.
Maxamed baa yidhi: guddoomiye waa sax oo waan arkaa inay 30-kii daqiiqo ee dhammaadeen laakiin waxaan sugi inta uu N/hure iiga imanayo, adiguse xaggeed usocotaa Kaadi-tag miyaa tahay?. Kayd-baa ugu jawaabay anigaa ku baddalaya oo uu Dhagawayne iisoo kaa diray!!. Maxamed baa yidhi: guddoomiye miyaad igu ilaaqtami waa sidee xaalku? iyo mayee N/hure waa dhab’e difaacaagii ku laabo, waardiga laguma sheekaysta’e!…….
Ma hadalbaa hadhay?
Sidaasuu Maxamed sh cali ku qaatay darsi qaro-wayn oo uuna bilo iyo bilo ku fahmeen sharraxaad, sidaasuu ku ogaaday xaqiiqda madaxtinimada halgamaagu nooca ay tahay, sidaasuu naftiisa ugu sheegay inuu yahay arday maalintii koowaad fasalka soo fadhiistay, sidaasuu ku ogaaday in hubsiimadu tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaadho xaqiiqada arrini leedahay.
Maantana kuwii aan maalintaas qisadu dhacday buuryada laga goynin, ayaa macalimiin is magacaabay innoo ah!!, si ay halganka iyo sifada halgamaaga innoogu sharaxaan.
Lagasoo bilaabo xilligii guddoomiye Sh Ibrahim Cabdallah (AUN) ilaa maanta oo aynu joogno sidaasaa looga dhaqmaa X/dhexe ee jabhadda. ciidanku maalintiibay shaqeeyaan, masuuliyiintuna habeenkiibay waardiga qaybsadaan. Maxamed cumar cismaan, guddoomiyaha xilligani kolkuu x/dhexe joogo wuxuu odhan jiray: aniga waardiga saddexda dambe ee habeenimo halaygu aadiyo, waa codsi’e.
Waa inoo markale iyo qisada xigta insha allaah.
By: Ismaaciil Cali Ismaaciil!
Daawo: Madaxweyne Waare oon Heshiis Lama Filaan ah lagalay Dowalada Fadaraalka
Waxaa hadal lama filaan ahi kasoo baxay Madaxwaynaha Hirshabeelle Maxamed cabdi Waare kaasi oo ...
Daawo Wararkii ugu dambeeyay ee jigjiga Iyo Dulmi Diid oo kushiray.
Wararka magaala jigjiga naga soo gaaraya waxaa kamida Dhaqdhaqaaqa Dulmi Diid oo shir jaraa'id ...
Daawo: Wadahadalkii ONLF & Ethiopia oo Bilowday Iyo Heshiis Hordhac ah.
Waxaa Magaalada Asmara Kasocda wadahadallo udhaxeeya O N L F iyo Ethiopia Waxayna shaaciyeen ...
HASSAN SH MOHAMOUD MAXUU XAMAR KU ARKAY MAALMAHAN UU JOOGAY
Madaxwaynihii Horee Soomaaliya Xasan Sheekh Mohamud ayaa dhawaan kusoo laabatay Muqdisho Hadaba halkan ka ...
Daawo:Dareenka dadwaynaha Heshiiska Is Afgarad ee ONLF iyo Itobiya.
Shacabka Somaalida Ogadenia ayaa si Taxadar leh usoo dhoweeyay Heshiiska Is Afgaradka Hordhaca ah ...
Maxaan u Halgamaynay? oo Geerida isugu xukunay ?.
Geeridu waa waxa ugu Khadhaadh ee Nooluhu si iskumid ah uga wada cabsado Bini'aadmiguna ...
Daawo:Gar-naqsiga Axmed madobe iyo Ergadii Farmaajo u diray.
Waxaa magaalada Kismaayo Kulan xasaasiya kuyeeshay xubno isugu Jira Labada Aqal ee Barlamaanka Somaaliya ...
U.S. Embassy in Addis Ababa is suspending operations on Wednesday.
Out of an abundance of caution the U.S. Embassy in Addis Ababa is suspending ...
Daawo Gobay Wadani ah Abwaan Bashiir Abdi Yuusuf
Gabay Guubaabo Wadani ah iyo Abwaan Bashiir Abdi Yuusuf Daawasho Wacan.
O N L F iyo Ethiopia oo wada hadal Uga bilawday Asmara
Waxaa magaalada Asmara ee xarunta dalkaERITREA ku kulmay Wefti kasocda Dowladda Itoobiya iyo Madaxada ...
© 2017 ogaden24 - All rights reserved.
Designed By: Ogaden24.